Ulwazi oluneenkcukacha malunga "Sql Server Kufunyenwe Impazamo ye-I / O esekwe ngokuNgqinelanayo: Ikhasi elidlakadlaka "
Ikhaya iimveliso DataNumen SQL Recovery Sql Server Kufunyenwe Impazamo ye-I / O esekwe ngokuLungelelwanisiweyo ngokusesikweni
Xa ufakela isiseko sedatha seMDF kwi SQL Server, ubona lo myalezo wemposiso ulandelayo:
SQL Server Ndifumene impazamo ye-I / O esekwe kulungelelwaniso olusebenzayo: iphepha eliqwengileyo (utyikityo olulindelekileyo: 0x ########; utyikityo lokwenene: 0x #########)). Kwenzekile ngexesha lokufundwa kwephepha (#: #) kwindawo yedatha # # offset ### kwifayile 'xxxx.mdf'. Imiyalezo eyongezelelweyo kwifayile ye- SQL Server ilog yempazamo okanye inkqubo yomcimbi wokungena inokubonelela ngeenkcukacha ezithe kratya. Le yimeko yeempazamo enkulu esongela isiseko sedatha kwaye kufuneka ilungiswe kwangoko. Gcwalisa isiseko esigcweleyo sokungqinisisa (DBCC CHECKDB). Impazamo inokubangelwa zizinto ezininzi; ngolwazi oluthe kratya, bona SQL Server Iincwadi ezikwi-Intanethi.
apho 'xxx.mdf' ligama lefayile ye-MDF efikelelweyo.
Ngamanye amaxesha wena. Nangona kunjalo, xa uzama ukwenza ingxelo ye-SQL, enje
KHETHA * UKUSUKA [Uvavanyo lweDVD]. [Dbo]. [Test_table_1]
uya kufumana umyalezo wemposiso ongentla.
Idatha ekwifayile ye-MDF igcinwe njengamaphepha, iphepha ngalinye liyi-8KB. SQL Server Sebenzisa iindlela ezimbini zokuqinisekisa ukungqinelana kunye nokudityaniswa kwedatha kwiphepha, oko kukuthi, itsheki okanye iphepha elikrazukileyo. Zombini zinokuzikhethela.
If SQL Server ifumana amaphepha aqhekekileyo kwamanye amaphepha edatha ayisebenzi, emva koko iya kunika ingxelo ngale mpazamo.
SQL Server 2005 Impazamo5_1.mdf Impazamo5_1_fixed.mdf
SQL Server 2008 iR2 Impazamo5_2.mdf Impazamo5_2_fixed.mdf
SQL Server 2012 Impazamo5_3.mdf Impazamo5_3_fixed.mdf
SQL Server 2014 Impazamo5_4.mdf Impazamo5_4_fixed.mdf